↑ International Boundary Study No. 42 - November 30, 1964: Burma - China Boundary။ Florida State University။ 28 May 2007 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2008-10-24 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂.၀ ၂.၁ Nisbet၊ John။ Burma Under British Rule and Before။ Adamant Media Corporation, 2005။ p. 416။ ISBN 978-1-4021-5293-1။ 2008-10-24 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Harvey၊ G E။ History of Burma: From the Earliest Times to 10 March 1824။ Asian Educational Services, 2000။ pp. 165, 254။ ISBN 978-81-206-1365-2။ 2008-10-24 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ရွှေလီမြစ်&oldid=626169" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၁၅:၅၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။